A tọhapụrụ Mastodon 3.2, mara mgbanwe ya kachasị mkpa | Site na Linux
A tọhapụrụ Mastodon 3.2, mara mgbanwe ya kachasị mkpa
Nwepụta nke ọhụrụ version nke Mastodon 3.2 nke mejupụtara nkwenye 380 sitere na ndị ọrụ mmekọrịta 27 kemgbe Mee 14, 2020. Nke ezigbo mma mgbanwe na-ọkọnọ, nke anyị nwere ike mata nal redesign nke interface maka ụda mmeputakwa, ike - zipu ọdịnaya gaa na nyiwe ndị ọzọ site na iji ihe ọkpụkpọ mpụga, n'etiti ihe ndi ozo.
Maka ndị na-amaghị Mastodon, ị kwesịrị ịma nke ahụ nke a bụ usoro ikpo okwu n'efu maka nkenye nke netwọkụ na-elekọta mmadụ, nke na-enye gị ohere ịmepụta ọrụ na akụrụngwa nke gị nke ndị na-eweta ọrụ anaghị achịkwa.
Ọ bụrụ na onye ọrụ enweghị ike ịmalite ọnụ nke aka ha, ha nwere ike ịhọrọ ọrụ ọha na eze tụkwasịrị obi iji jikọọ. Mastodon bụ nke otu netwọkụ gọọmentị federated, bụ nke ejiri rụọ ọrụ ActivityPub iji mepụta otu usoro njikọ.
1 Banyere Mastodon
2 Ihe ohuru na Mastodon 3.2
Ihu ọma na a nutshell bụ ezigbo gọọmentị sava nke sava na-emeghe ngwanrọ mepere emepe. Nke a pụtara na ndị ọrụ agbasaa na ndị kwụụrụ onwe ha na obodo nwere onwe ha akpọrọ "instances" (sava) nke network ya ka ana akpo fediverso (ntanet n'etiti etiti na eluigwe na ala) mana ka ejikọtara ọnụ site na ohere ị na-emekọrịta.
Ojiji ya bụ n'efu, ndị ọrụ na-etinye ọnọdụ ma ọ bụ "toots" ruru ihe odide 500, ma ọ bụ ọdịnaya multimedia, gụnyekwara iji mkpado ma kpọtụrụ ndị ọrụ ndị ọzọ.
Ekwesiri ighota na enwere ike ịnweta ọha na eze ma ọ bụ n'ụzọ nwere oke dị ka njirisi dị iche iche. N'ihi ya, enwere ọnọdụ dị iche iche dị ka ndị na-ese ihe, ndị na-akwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mmemme mmekọrịta, ma ọ bụ isiokwu ụfọdụ.
Mastodon dị maka desktọọpụ na ihe nchọgharị weebụ na mkpanaka na-akwado HTML5.Ihe osise nke TweetDeck sitere n'ike mmụọ nsọ, ya na ogidi dị iche maka akụkọ ihe mere eme nke steeti na gọọmentị etiti. Ndi otu ndi otu ndi federated a kpokọtara na otu ndi mmadu na-achikota ndi mmadu.
A na-ekesa koodu isi mmalite n'okpuru ikikere AGPLv3. E nwekwara a static interface maka ibipụta ọha na eze ndị dị otú ahụ dị ka profaịlụ na ọnọdụ.
A na-ahazi nchekwa data site na iji PostgreSQL na Redis. A na-enye API na-emeghe maka plugins na-emepe emepe ma jikọta ngwa ndị dị na mpụga (enwere ndị ahịa maka gam akporo, iOS na Windows, ị nwere ike ịmepụta bọọlụ).
Ihe ohuru na Mastodon 3.2
Newdị ọhụrụ a na-abịa na ezigbo mgbanwe dị mma, nke dịka ọmụmaatụ ọhụụ ọhụrụ maka mmeputakwa ụda pụta ìhè, ebe ọ bụ ka emeputara ohuru Ma ugbu a, ọ ga - ekwe omume wepụ ihe mkpuchi sitere na ọba egwu ebudatara ma ọ bụ kenye ihe onyonyo nke onwe gị.
Mgbe maka vidiyo, Na mgbakwunye na ekenye thumbnail dabere na ọdịnaya nke etiti mbụ, ugbu a enwere nkwado iji wepụta ihe oyiyi ọdịnala gosipụtara karịa vidiyo tupu ịmalite ịkpọ egwu.
Ọzọ isi mgbanwe site na Versiondị ọhụrụ a bụ maka njikọta vidiyo na ọdịyo nke akwadoro na Mastodon gaa na nyiwe ndị ọzọ, ebe ọ bụ agbakwunyere ikike imeghe ọdịnaya a na-eji ihe ọkpụkpọ mpụga nke ikpo okwu eji, dịka ọmụmaatụ, iji twitter: ọkpụkpọ.
N'aka nke ọzọ, Anyị nwere ike ịchọpụta na agbakwunyere nchebe akaụntụ. Ọ bụrụ na onye ọrụ enweghị njirimara abụọ nwere ike ịkwado ma jikọọ na akaụntụ ha ma ọ dịkarịa ala izu abụọ, mgbe ahụ nnwale ọhụrụ ịbanye site na adreesị IP na-amaghị ga-achọ nkwenye site na koodu nnweta zigara na email.
Ọzọkwa mgbe ahaziri gị iji gbochie, gbochie ma ọ bụ leghara ndị bịara ya anya, ị nwere nhọrọ nke ijikọ onye ọrụ na nkọwa nke naanị onye mgbakwunye ahụ na-ahụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji ihe edetu gosi ihe kpatara mmasị otu onye ọrụ.
Finalmente ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ụdị ọhụrụ a wepụtara, ịnwere ike ịlele nkọwa dị na post izizi. Njikọ bụ nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » A tọhapụrụ Mastodon 3.2, mara mgbanwe ya kachasị mkpa
Ha na-atụpụta ịmalite ụdị IoT nke Fedora na nsụgharị Workstation na Server
OpenSSF: oru ngo lekwasịrị anya na imeziwanye nchebe nke ngwanrọ na-emeghe